ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အင်ဒိုနီးရှားသံအမတ်ကြီး တွေ့ဆုံ
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှု ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်တို့နှင့်အတူ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး Call ခန်းမ၌ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Iza Fadri နှင့် တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် အင်ဒိုနီးရှားသံအမတ်ကြီးမှ ယခုလိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ပေးသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့တွေ့ဆုံမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် စိတ်ဝင်စားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေးရရှိမှုမှာ နှစ်ကွာခြားမှုမရှိပါကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားအခက်အခဲတွေ့ကြုံသည့်အခါ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အခက်အခဲရှိပါက မိမိတို့နိုင်ငံမှ ကူညီပေးနိုင်ရန် ရှိပါကြောင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ လူမျိုးစုများသည် မန္တလေးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းနှင့် မိမိနိုင်ငံတွင် မန္တလာဆိုသည့် လူမျိုးများရှိကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ထွက် ပြောင်းဖူးကို စိတ်ဝင်စားပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို တိုးတက်ရန် အလားလာရှိပါကြောင်း၊ မိမိ၏ မွေးရပ် ဇာတိသည် တောတောင်ရေမြေများရှိသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်တူပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံထွက် ဆန်စပါးကိုလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ စိတ်ဝင်စားပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အထွက် ဆန်စပါးများ တင်ပို့မှုကို လိုချင်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ခဲသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပြီး ယခုဆို ဆာဗေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီများမှ လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က ယခုလို သံအမတ်ကြီး နှင့် တွေ့ခွင့်ရသည့်အတွက် များစွာဝမ်းသာပါကြောင်းနှင့် တက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် မိတ်ဆက် ပေးပြီး ယနေ့ရောက်ရှိလာသော သံအမတ်ကြီးရောက်ရှိချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၏ အထင်ကရဖြစ်သော တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်နှင့် တိုက်ဆိုက်မှုရှိနေပါသဖြင့် ပွဲတော်အား လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်းနှင့် ပျော်ပျော်ပါးပါးဆင်နွှဲနိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ အငျဒိုနီးရှားသံအမတျကွီး တှဆေုံ့
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ လငျးထှဋျ၊ ပွညျနယျစီမံကိနျးနှငျ့ စီးပှားရေး ဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျ၊ ပွညျနယျသယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာညီညီအောငျ၊ ပွညျနယျစိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးနှငျ့ ဆညျမွောငျးဝနျကွီး ဦးစိုငျးလုံကြျော၊ ပွညျနယျလြှပျစဈ၊ စှမျးအငျနှငျ့ စကျမှု ဝနျကွီး ဦးစိုငျးရှဲနျတဈလုံ၊ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇျောတို့နှငျ့အတူ နိုဝငျဘာ ၂၀ ရကျ မှနျးလှဲ ၂ နာရီက တောငျကွီးမွို့၊ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ရုံး Call ခနျးမ၌ အငျဒိုနီးရှားသံရုံးမှ သံအမတျကွီး H.E. Dr. Iza Fadri နှငျ့ တှဆေုံ့ကွောငျးသိရသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ အငျဒိုနီးရှားသံအမတျကွီးမှ ယခုလိုရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ တှဆေုံ့ခှငျ့ပေးသညျ့ အတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ ယနတှေ့ဆေုံ့မှုသညျ မွနျမာနိုငျငံ၊ ရှမျးပွညျနယျအတှငျးရှိ ခရီးသှားလုပျငနျးမြား၊ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးလုပျငနျးမြားကို အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံအနဖွေငျ့ စိတျဝငျစားပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံသညျ လှတျလပျရေးရရှိမှုမှာ နှဈကှာခွားမှုမရှိပါကွောငျး၊ အငျဒိုနီးရှားအခကျအခဲတှကွေုံ့သညျ့အခါ မွနျမာနိုငျငံမှ ကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့ကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ အခကျအခဲရှိပါက မိမိတို့နိုငျငံမှ ကူညီပေးနိုငျရနျ ရှိပါကွောငျး၊ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံရှိ လူမြိုးစုမြားသညျ မန်တလေးနှငျ့ဆကျစပျမှုရှိကွောငျးနှငျ့ မိမိနိုငျငံတှငျ မန်တလာဆိုသညျ့ လူမြိုးမြားရှိကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျထှကျ ပွောငျးဖူးကို စိတျဝငျစားပါကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့နှငျ့အတူ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးကို တိုးတကျရနျ အလားလာရှိပါကွောငျး၊ မိမိ၏ မှေးရပျ ဇာတိသညျ တောတောငျရမွေမြေားရှိသဖွငျ့ ရှမျးပွညျနယျနှငျ့တူပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံထှကျ ဆနျစပါးကိုလညျး အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှ စိတျဝငျစားပါကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျအထှကျ ဆနျစပါးမြား တငျပို့မှုကို လိုခငျြပါကွောငျး၊ ရှမျးပွညျနယျ (အရှပေို့ငျး)တှငျ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှ ခဲသတ်တုတူးဖျောရေးလုပျငနျးတဈခုရှိပွီး ယခုဆို ဆာဗေးလုပျငနျး မြား ဆောငျရှကျနပေါကွောငျးနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလိုပါကွောငျး၊ ကုမ်ပဏီမြားမှ လညျး ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ကို ဆကျသှယျဆောငျရှကျမှုပွုလုပျသှားမညျဖွဈကွောငျး ဆှေးနှေးသှားသညျ။
ဆကျလကျ၍ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာ လငျးထှဋျက ယခုလို သံအမတျကွီး နှငျ့ တှခှေ့ငျ့ရသညျ့အတှကျ မြားစှာဝမျးသာပါကွောငျးနှငျ့ တကျရောကျလာသညျ့ ပွညျနယျဝနျကွီးမြားနှငျ့ မိတျဆကျ ပေးပွီး ယနရေ့ောကျရှိလာသော သံအမတျကွီးရောကျရှိခြိနျတှငျ ရှမျးပွညျနယျ၏ အထငျကရဖွဈသော တနျဆောငျတိုငျ ပှဲတျောနှငျ့ တိုကျဆိုကျမှုရှိနပေါသဖွငျ့ ပှဲတျောအား လာရောကျလညျပတျရနျ ဖိတျချေါပါကွောငျးနှငျ့ ပြျောပြျောပါးပါးဆငျနှဲနိုငျရနျ မြှျောလငျ့ပါကွောငျး ဆှေးနှေးသှားသညျ။